Zvakawanda ndezvimwe zvekushandisa mari yeGIS
GIS Manifold, chimwe chinhu zvakare chine marongero
Imwe nguva yapfuura ndakataura mune chinyorwa nezve maitiro ekugadzira mharidzo dzokudhinda uchishandisa Manifold GIS. Panguva iyoyo isu takagadzira yakarongeka, mune iyi kesi ini ndoda kuratidza yakaoma kunzwisisa. Uyu ndiwo muenzaniso weagrological productivity mepu; sezvo mepu huru iri yazvino kushandiswa kubva pamufananidzo ...
Geographic Information System uchishandisa Manifold GIS
Ichi ndechimwe chezvigadzirwa izvo zvinofadza kuve nekusimudzira, uye kuti mumweya wavakavakirwa waitwa kuti uwanikwe kunharaunda. Iri ibhuku rinotsanangura maitiro ekushandisa manisiparati yeGeographic Information System uchishandisa Manifold GIS. Shanduro dzakapepetwa dzeizvi zvigadzirwa dzaive ...
Kudzidzisa CAD / GIS, siyana GIS
Google Earth; rubatsiro rwakaonekwa rwevashandi vemapepa
Google Earth, kunze kwekuve chishandiso chevaraidzo kuruzhinji rwevanhu, yakavewo chinoonekwa chinoonekwa chekartography, zvese kuratidza mhedzisiro uye kutarisa kuti basa riri kuitwa rakaenzana; chii chausingataure seyekudzidzisa chishandiso chejogirafi kana geodey makirasi. Mune ino kesi ini ...
Google Earth Kml siyana GIS
Cartography, Kudzidzisa CAD / GIS, Google pasi / mamapu, siyana GIS
Ndichitora mukana wehurukuro ichangoburwa neCadastre institution yanga ichitsvaga nzira yekuburitsa mepu dzayo, pano ini ndinopfupisa zvinhu zvakakosha kudzosa kununurwa kwechinhu kunharaunda. Zvichida panguva yacho inozoshandira mumwe munhu anoda kutora danho kana kukumbira rubatsiro rwe geofumada. Nei MapServer Mamiriro ezvinhu aive mumwe munhu, anga aine ...
AutoDesk Bentley Systems Blog DGN Google Earth gvSIG Os siyana GIS mapserver My geofumadas
Cadastre, Geospatial - GIS, siyana GIS, Microstation-Bentley, qgis
Ndisati ndavaudza kuti ndaizokudziridza kudzidziswa mukushandisa ArcGIS 9.3, ine hukuru hwakakura pakati nepakati nekuda kwedaro, nguva yangu diki uye nemabasa evadzidzi. Iye zvino ndinokusiira dzimwe mhedziso: Pane iyo nzira: Ini ndinoshuva kuti dai zvese zvaive nyore. Kana zvaizopa dzidziso, dzidzisa nemuenzaniso wakaunzwa ...
DGN Kml siyana GIS
ArcGIS-ESRI, siyana GIS, famba
Varipi vashandisi veGIS vakawanda?
Imwe nguva yapfuura, mumwe mukuru wezve tekinoroji weDutch aigara achitaura izvi kwandiri: “Kutaura chokwadi, ndinoshamiswa nezvinotaurwa nepeji yeManifold. Zvinoitika ndezvekuti handina kumbozviona zvichishanda pamushini ”Svondo rino, Patrick Webber - kubva kuSpatial Knowledge- akataura chirevo chisina hanya icho chave chichiita kuti tidedere ...
Bentley Systems ESRI siyana GIS My geofumadas
Ichi chiitwa pasi pemamiriro akafanana, kuyera nguva yazvinotora kutanga chirongwa kubva pakudzvanya pikicha kusvika panguva yairi kuita. Nezve zvinangwa zvekuenzanisa, ini ndashandisa iyo inotanga munguva shoma, uyezve chiratidzo (chakatenderedzwa) chenguva zvine hukama neizvi. Handizivi…
AutoDesk Bentley Systems Google Earth gvSIG Os siyana GIS
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Google pasi / mamapu, GvSIG, siyana GIS, Microstation-Bentley, qgis
… Kutengesa kugona kweizvo software yemahara zvinoita kunonetsa kupfuura kugonesa mukuru kuti apare mhosva (piracy), saka hazviite software inodhura. Munguva pfupi yapfuura Bentley yakatanga mushandirapamwe wekusimudzira Bentley Mepu, uchishandisa sekupokana, kuti hazvidi kuti ufunge zvakasiyana kana ese ari maviri ...
ArcView AutoDesk Bentley Systems Civil 3D ESRI Google Earth gvSIG Os siyana GIS
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Cadastre, Geospatial - GIS, siyana GIS, Microstation-Bentley
Ini ndoda kusanganisa tafura yeExcel kune mepu mune shp fomati. Tafura yacho ichave ichishandurwa, saka ini handidi kuishandura kuita dbf fomati, kana kuiisa mukati meiyo geodatabase. Chiitiko chakanaka chekuuraya zororo rezororo iri uye nenzira tarisa ArcGIS 9.3 kubva kuAcer Aspire ...
Acer Aspire siyana GIS Shp
ArcGIS-ESRI, siyana GIS
Nhamba yepamusoro neGenfold GIS
Kuedza zvinoitwa neMANIFold GIS nemadhijitari modhi, ini ndinoona kuti iyo toy inoita zvinopfuura izvo zvatakaona kusvika parizvino kune nyore nzvimbo yekugadzirisa. Ndiri kuzoshandisa semuenzaniso iyo modhi yatakasika mumugwagwa wekurovedza muviri ne Civil 3D. Tumira mhando yedhijitari Mune izvi Manji dhongi rine simba, ...
AutoDesk ESRI siyana GIS
siyana GIS, topografia
Ndiani asingade kuve netafura inofananidza mhando dzakasiyana dzeGIS software nemabasa ekuongorora kuitira kuti atore danho pakutenga. Zvakanaka, chinhu chakadai chiripo muPoint of Kutanga, kusanganisira vagadziri vekushandisa kwakakurumbira senge AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, pamwe nevagadziri vemidziyo seTopcom, Leica uye ...
ArcView AutoDesk Civil 3D ESRI VanaChiremba vezvirwere zvese Magazines siyana GIS
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, GPS / Equipment, siyana GIS, topografia
Kuitwa kwezvishandiso zveGIS kubvisa vector kusapindirana kune zvakajairika zvinogamuchirwa mumamiriro ekunze topology inonzi iyo nzira. Chishandiso chimwe nechimwe chakachiisa nenzira yadzo, ngatitarisei nyaya yeBentley Mepu uye Manifold GIS. Microstation Geographics Microstation inosanganisira maturusi maviri akafanana, rimwe rakaitwa ne ...
Bentley Systems siyana GIS
siyana GIS, Microstation-Bentley
Iko kunogara kune chimwe chinhu icho maturusi emakambani makuru asingaite nemazvo, makambani madiki anotora mukana weizvi kugadzira mhinduro dzinosangana nezvinodiwa nevatengi, kazhinji zvavaive. Kana iri bhizinesi rakanaka kana kwete, iyo modhi inonakidza, vanowanzoenda kumisangano yegore negore kunosimudzira zvigadzirwa zvavo kana masevhisi; ndangariro…
ArcView Bentley Systems ESRI siyana GIS
Innovations, siyana GIS, Microstation-Bentley, My geofumadas
Connect Manifold ne Open Street Mepu
Nguva pfupi yapfuura ndanga ndichikuudza kuti Manifold inogona kubatana neGoogle, Yahoo uye Virtual Earth. Iye zvino chinongedzo chekubatanidza kune Open Street Mepu (OSM) chabuda, icho nenzira chave chakagadzirwa muC # nemushandisi weforum anonzi Jkelly. Nhau idzi dzakaonekwa svondo rino pane Manifold forum, uko ...
Google Earth siyana GIS
Google pasi / mamapu, siyana GIS, Virtual Earth